Zámek Humprecht - Ngwudata egwu na mgbasa ozi maka vidiyo vidio YouTube ma ọ bụ ọrụ multimedia
HomeCzech ParadiseHumprecht Chateau
Humprecht Chateau	Hapụ ikwu
Humprecht bụ ebe obibi na mpaghara Jičín na ụlọ elliptical ụlọ, nke e wuru na 1666-1668 afọ. Ọ na-adị na Paradaịs Bohemia PLA, banyere 0,5 km n'ebe ugwu ọdịda anyanwụ nke Sobotka, na mpaghara nchịkwa nke otu aha ahụ. Humprecht Chateau, nke a na-ahụ anya ma na-adọrọ mmasị na ya, guzo n'elu ugwu Palanka dị nso na Sobotka. Ihe kachasị mma nke nnukwu ụlọ ahụ bụ ụlọ elu nke 16 dị iche iche na ihe nkiri 6-8 multiplex.
Humprecht bụ ebe a na-achọ ịchụ nta, ọ bụkwa ebe obibi okpomọkụ nke Humprecht Jan Černín nke Chudenice, bụ onye nnọchianya nke eze ukwu na Venice. Carlo Lurago mepụtara atụmatụ ahụ dịka Mannerism, na ihe ndị mepụtara n'oge Renaissance na Baroque mbụ, eleghị anya dị ka nkọwapụta nke Tower Gala Tower na Constantinople. Ọ bụ Francesco Ceresola na-eduzi 1666-68, bụ onye rụziri ụlọ obibi 1678 ma welie ya site n'otu ụlọ ahịa. Otú ọ dị, e bibiri ntọala ndị ahụ, nke mere na a ghaghị imebi ụlọ akụ na ụba ala, na ntọala nke ájá ájá ahụ. A na-etinye ihe nkedo ọlaedo ahụ n'elu nke 1829 afọ kama nke mbụ ruby ​​Slavic obe, dabere na akụkọ banyere Heřman Chernin n'ụlọ mkpọrọ na Turkey.
Mgbe Černín ụlọ a zụrụ site na 1738 ezinụlọ Netolice (Václav Kasimir Netolický si Eisenberg), ma ọ na-eji nwayọọ nwayọọ gbakọọ. N'ime afọ 1937-39 ka e wughachiri. N'oge Agha Ụwa nke Abụọ, ndị Germany weere ya dịka onye na-ekiri ihe nkiri. Na 70. afọ 20. narị afọ, ụlọ nyocha ahụ edoziwo.
A na-etinye ebe obibi ịchụ nta na ala ala elliptical n'elu ugwu basalt n'elu obodo ahụ. N'elu elu nke mbụ, e nwere windo ellipipsidal (obere ụlọ elu) nke na-ejedebe n'elu ụlọ elu, nke a na-ejikwa ebe anọ anọ na-akwụsị ma ọ bụ ọkara ọnwa. N'elu elu nke ụlọ ala dị n'okpuru ebe ahụ, e nwere eriri osisi nke dị na mbadamba nkume. N'obodo ahụ bụ ụlọ 27, n'etiti ụlọ ahụ, e nwere mita iri isii na isii n'ịdị elu nke elliptical nke nwere oke mma, ebe a na-enwekarị oriri na agbamakwụkwọ. N'elu ụlọ a na-ese ihe nnọchianya Cernin site na R. Benes, na njedebe nke ihe osise nke al secco nke R. Wiesner na-ezo aka ná ndụ Humprecht Jan. N'ime ụlọ dị n'okpuru ellipse gburugburu ụlọ ngosi ihe nkiri ahụ, e nwere ihe ngosi ngosi nke ụlọ ahịa, na ụlọ elu nke abụọ ụlọ ngosi nke ụlọ ọrụ Sobotka City - eg Mantal National Battalion nke 1848 National Guard. Ihe a na-akpọ Enwere ike ịchọta "oghere ezumike" site na ụlọ elu ahụ, site na ebe e nwere echiche dị mma nke mpaghara ahụ dum. Ụlọ ụgbọala dị ihe dị ka mita 300 na ebe a na-eli ozu. Na ụzọ na-eli ozu mgbidi e nwere mma mara obodo ahụ. N'akụkụ nke ogige ọhịa ahụ, e nwere ọdọ mmiri nke nwere ụlọ.
Otu ubi deer dị gburugburu ebe obibi ahụ, emesia ghọọ onye na-ede agwọ.
Iji kpọtụrụ m, jiri ụdị kọntaktị.
← Ihe ntanetị nke Windows 10
Kost nnukwu ụlọ →
Ugbu unu @ r *
-Ahapụ ubi efu